Nwụrụ anwụ iPhone Data Recovery: Naghachi Data si nwụrụ anwụ iPhone 2
Agbake data nwụrụ anwụ iPhone 4
My iPhone 4 wee kpamkpam nwụrụ anwụ ụnyaahụ. Ọ gaghị na-a ụgwọ, ọ dịghị ihe ya dị nnọọ nwụrụ. M weere ya ka Apple ụlọ ahịa ha ekwuwo na ọ nwụrụ anwụ. M na nso nso kwadoo ya elu mgbe m arụnyere iOS 5. My ajụjụ bụ, ọ ga-agbake foto na vidiyo na biri na ya? M na-emeghị mmekọrịta ya na iTunes-adịbeghị anya. Bụla ọ na aro?
My iPhone bụ nke nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ya online, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị na-achọ ihe ngwọta na-agbake data si ha nwụrụ anwụ iPhone. Mgbe niile, ngwaọrụ kemgbe nwụrụ anwụ, na-azọpụta ndị data dị oké mkpa. Ọfọn, naghachi data nwụrụ anwụ iPhone, ị chọrọ enyemaka nke a-atọ ndị ọzọ omume, nke pụrụ inye aka kpọmkwem iṅomi gị iPhone ma na-data na ya. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a oke ma, ebe a bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac) (maka Mavericks) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows). A nwụrụ anwụ iPhone data mgbake software nwere ike inyere naghachi data gụnyere kọntaktị, SMS, photos, videos, ndetu, na ndị ọzọ.
The nduzi n'okpuru dabeere na Windows version nke software. Mac ọrụ nwere ike ịgụ na ọrụ ndu nke Mac version ebe a.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị nwụrụ anwụ iPhone na kọmputa
Ẹkedori Wondershare Dr.Fone maka iOS software mgbe ị download na wụnye ya na kọmputa gị, mgbe ahụ, jikọọ gị nwụrụ anwụ iPhone na kọmputa na a dijitalụ USB. Ọ dịghị mkpa, ọbụna ọ anaghị arụ ọrụ. Naanị mee ya. Mgbe ejikọta gị iPhone, ị ga-enweta ihe interface dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị nwụrụ anwụ iPhone maka data na ya
N'ihi na iPhone Plus 6/6 / 5S / 5C / 5 / 4S ọrụ, gị na mkpa iji pịa "Malite iṅomi" bọtịnụ iṅomi gị iPhone. Mgbe maka iPhone 4 / 3GS, ị nwere ike gaa Advanced Mode ka iṅomi ngwaọrụ gị site na-eso nzọụkwụ n'okpuru na-eme ya n'ụzọ ziri ezi:
Jide gị nwụrụ anwụ iPhone na pịa "Malite" button.
Pịa Ike na Home buttons na gị nwụrụ anwụ iPhone n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd. The Software ga gụọ oge maka gị.
Mgbe 10 sekọnd agafewo, hapụ Ike button ozugbo, ma ịnọgide na-ejide ndị Home button ọzọ 15 sekọnd.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-gwara gị na ihe ịga nke ọma banyere ngwaọrụ scanning mode na software amalite ịgụ isiokwu gị iPhone ugbu a.
Nzọụkwụ 3. Preview & naghachi data nwụrụ anwụ iPhone
Doppler ga-akwụsị mgbe a nkeji ole na ole. Hụrụ data ga-egosipụta na edemede, dị ka igwefoto Roll, Photo Stream, kọntaktị, ozi, wdg Ịnwere ike ihuchalu ọ bụla n'ime ha otu otu, na kaa ndị ị chọrọ ịzọpụta ha na kọmputa gị site na ịpị "Naghachi".
Cheta na: The data dị na onye ọ bụla udi na-agụnye ndị ehichapụ-adịbeghị anya. Ị nwere ike ịlele ha site eji bọtịnụ n'elu: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
Olee otú Naghachi Data si a Broken iPod aka
Olee otú Naghachi Data site na mmiri mebiri emebi iPad
Apple Fans ga-mara: A Anya History of iPhone na iOS [infographic]
Otú nyefee Photo Library si iPhone ka Computer
Olee otú mmekọrịta iPhone Ndi ana-akpo ka Outlook
Olee otú Naghachi Data si ama esịn Broken iPhone
Olee otú bugharia iPhone (5S / 5C / 5 / 4S / 4) Video Files
> Resource> iPhone> Nwụrụ Anwụ iPhone Data Recovery: Naghachi Data si Nwụrụ Anwụ iPhone